MANDHEERA, Kenya - Ciidamada booliska Kenya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen nin 53 sano jir ah, oo la shaqeynayay kooxda Al-Shabaab, xilli uu isku dayay inuu usoo gudbo Soomaaliya.
Backstone Agaro ayaa lagu qabtey magaaladda Mandheera, isagoo ka yimid dhanka Garissa, islamarkaana dadka degaanka waydiinayay inay u tilmaamaan xadka Soomaaliya halka looga gudbi karo.
Waxa uu ku yimid Mandheera Bus ay leedahay Shirkadda Tawakal, waxaana markii la qabtey ay booliska ka heleen boorsadiisa Buug ay ugu qoran yihiin xogo uu kasoo aruuriyay in ka badan 100 goobood oo kamid ah Kenya.
Backstone Agaro ayaa maanta oo Jimco ah lasoo taagey Maxkamad ku taalla Mandheera, waxaana booliska loo ogolaadey inay mudo 7 cisho ah ku hayaan saldhiga, halkaasi oo lagu waydiinayo sababta uu ugu sii jeeday Soomaaliya iyo cida uu la shaqeeyo.
Waxaa la tuhmayaa in ninka uu Al-Shabaab u qaabilsanaa sirdoonka, sidoo kalena la shaqeeyo xubno kale oo ku sugan gudah Kenya, kuwaasoo suurtagal ay tahay inay maleegaan weeraro dalkaasi ay ka fuliyaan.
Isagoo ka jawaabeyay su'aallo la waydiiyay, Backstone Agaro oo ah fuundi dhisa guryaha ayaa sheegay in Mandheera uu u yimid arrimo shaqo, kadib markii ay saaxiibadiisa oo halkaasi ka shaqeysta ay u yeereen.
"Waxaan dadka waydiinayay inay ii tilmaameen meel aan seexdo [hotel] ee ma waydiin jihada Soomaaliya loo maro, sababtoo ah waxaan halkan imid xilli habeen ah, waxaan ahay qof ku cusub magaaladda," ayuu yiri Bachstone.
Ninkan ayaa sababta ugu weyn ee loo qabtey ayaa ah shaki ay booliska ka qabaan inuu kamid yahay Al-Shabaab, iyadoo kiiska lagu haysto uu yahay waxa ku kalifay inuu buugga gacanta [Book-Note] ku qorto magacyada magaalooyinka uu booqday.
Kenya ayaa la dagaalaan-dhacaysa wax ka qabashada weeraro argagaxiso oo Al-Shabaab ka fulinayso dalkeeda, iyadoo sababta loo beegsado lagu micneeyay inay ciidamadeeda qeyb ka yihiin howlgalka AMISOM, ee Soomaaliya.
Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in weerarkii Al Shabaab ee k dhacay degmada Dhoobley uusan...
Qarax culus oo ka dhacay Kenya iyo wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 13.08.2018. 14:22